Naadiga Buzz-ka Bulshada: La Wadaag Oo La Wadaag | Martech Zone
Naadiga Buzz-ka ee Bulshada: La Wadaag oo La Wadaag
Thursday, April 18, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah dhinacyada ugu waa weyn ee kaqeybgalka shir sida Caalamka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ayaa ah inaad ka tagto raaxada shabakadaada oo aad gasho kuwa kale oo aad u tiro badan. Iyadoo aan loo eegin baaxadda shabakaddaada, waxaad inta badan ku kooban tahay wararka iyo macluumaadka lagu wadaago gudaha. Aadida shir caalami ah sidan oo kale waxay kuu furaysaa shabakado badan oo cusub. Waxaan kula kulanay tan dad ah San Diego waxaanan sii wadaynaa inaan wax ka qoro dadka iyo farsamooyinka aan soo ogaannay.
Mid ka mid ah tikniyoolajiyadda noocaas ah ayaa ah Naadiga Buzz Social. Waxaan si deg deg ah ugu soo biirnay kooxda, waxaan noqonay shirkad gacansaar leh, waxaana bilaabi doonaa inaan si dhow ula shaqeyno kooxda halkaas joogta. Waa maxay Naadiga Buzz-ka?
Waqti hore, laba saaxiibbo ah iyo asxaabta suuqgeynta suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa ka wada hadlayey sida ay u wada shaqeyn karaan una caawin karaan midba midka kale inuu ku faafiyo warka ku saabsan macaamiishooda cusub. Midkood wuxuu lahaa macmiil cusub oo ay la shaqeyneysay wuxuuna u baahday inuu xoogaa soo gaadho, ka kale hay'ad samafal ah oo olole wadda oo waliba u baahan soo-gaadhis si loo kordhiyo deeqaha. Waxay ogaayeen in macaamiisha aysan ku qanacsanayn tirada taageerayaasha iyo kuwa raacsan, waxay ku saabsanayd ku soo noqoshada maalgashiga (ROI). Macaamiisha waxay doonayeen inay arkaan bulshadooda oo ficil ah, iyagoo u diraya taraafikada degelladooda, runtiina u beddelaya macaamiisha ama deeq-bixiyeyaasha.
Waxay isla garteen inay tani caqabad tahay waxayna u maleeyeen inay u badan tahay inaysan iyagu keli ku ahayn isla caqabaddaas. Kadib, waxay yiraahdeen "ka waran haddii?" Ka waran haddii shabakad iskaashi oo suuq-geyn ah la sameyn karo oo ka kooban xirfadlayaal ku jira warbaahinta bulshada iyo booska suuq-geynta ee internetka, iyadoo ujeeddadu tahay kaliya in lagu faafiyo ereyada midba midka kale meheraddiisa ama macaamiishiisa si dhab ah oo wanaagsan? Tani waxay dheereyn doontaa gaarsiinta farriinta macmiilka waxayna dhiirrigelineysaa wadaagista waxyaabaha tayada leh ee ka socda dhammaan baraha bulshada. Ka waran haddii loo dejiyey si ay nuxurku u noqon karo mid caalami ah ama mid maxalli ah, taasoo markaa kordhinaysa tirada himilooyinka la beegsanayo - kordhinta ROI ee macaamiisha? Xitaa ka sii wanaagsan, ka waran haddii xubnuhu wadaagi karaan waxyaabaha iyaga u gaarka ah, oo ay u helaan naftooda?
Fikrada ah naadi buzz bulshada dhashay. Viola! guul iskaashi!
HADABA WAA MAXAY BUZZ KU SAABSAN?
The Naadiga Buzz Social waxay xallisaa dhibaatada waxayna u suurta gelisaa milkiilayaasha ganacsiga ee aqoonta u leh warbaahinta bulshada, faa'iidooyinka suuqgeynta warbaahinta bulshada, iyo la taliyayaasha suuq geynta ee internetka fursad ay ku noqdaan kuwa dhisa sumcad iyadoo loo marayo nidaamka wadaagga maadooyinka adduunka ee ugu horreeya. Maaddaama wadaagista ay ku saleysan tahay isu-celinta, xubin kasta ayaa marka hore wax siisa. Taas macnaheedu waxa weeye in ereyga laga soo saaro noocyada waawayn ee la jaanqaadka shabakadahooda dabiiciga ah ayaa ah muhiimadda koowaad ee xubin kastaa leedahay .. Si kale haddii loo dhigo, waxa ku jira macmiilkaaga ayaa loo dallacsiin doonaa bartilmaameedyada dhagaystayaasha. Mar haddii xubin ka hesho dhibco ku filan wadaagista waxyaabaha la bar-tilmaameedsaday, isaga / iyadu markaa waxay ku biirin kartaa macmiilkiisa / keeda waxyaabaha barkadda. Tani waxay xaqiijineysaa in qof kastaa uu la wadaagayo waxyaabaha naadiga ah naadiguna waa xoog weyn oo abuuraya guux ku saabsan astaamaha aad adigu leedahay ama u shaqeyso.
Markaad gasho, waxaad la kulantay liistada waxyaabaha aad la wadaageyso oo aad ku abuuri karto dhibco. Waxa aan ugu raaxeysanayo sheyga waa heerka ugu dambeeya ee shaandhaynta aan ka faa'iideysan karo iyo tayada nuxurka aan la wadaagayo. Tani maahan mashiin otomaatig ah oo wax walba u tuuraya shabakadeena. Waan aqrin karaa, daaweyn karaa oo aan la wadaagi karaa waxyaabaha aan aaminsanahay inay qiimo u leeyihiin dhagaystayaashayda.
Tags: FacebookLinkedInisu dheelitirnaantala wadaagonaadi buzz bulshadaturunturoonTwitter
Suuqgeynta Hoax? Boodhadhka Ivar ee Undersea
La Wadaag Sawir ahaan: Muuji, Guji oo Wadaag Qoraalkaaga